Gọọmenti Naijiria na-ebo ndị nnọchi anya ego ka ha nweta ndị na-etinye ego n’usoro. – Igbo Services
Gọọmenti Naijiria na-ebo ndị nnọchi anya ego ka ha nweta ndị na-etinye ego n’usoro.
Gọọmenti Naijiria na Wednesde boro ndị nnọchi anya Naijiria nọ na mba ofesi ka ha chọpụta ma nye ndị na-etinye ego na mpaghara ha nwere ike itinye ego na Nigeria.
O nyere ya site n’aka Nigerian Investment Promotion Commission na Roundtable on Economic Diplomacy na ndị nnọchiteanya Naijiria dị iche iche, nke Abuja Chamber of Commerce and Industry kwadoro.
Onye na-ekwuchitere onye isi oche NIPC bụ Emeka Offor kwuru na ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya Naijiria na mba ndị ọzọ kwesịrị inye ụlọ ọrụ ahụ ohere ka ha na ndị isi ndị na-etinye ego na mba ofesi na-akpakọrịta.
O kwuru, sị, “E nwere ihe dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba ụwa 178 n’ofe ụwa ma ha niile na-agbalị ịdọta ego na mba nke ha. Nke ahụ na-agwa gị na asọmpi maka isi obodo siri ike, ọkachasị ugbu a anyị na-agbake na ọrịa COVID-19.
“Ya mere, ọ dị mkpa na ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ na-akwalite itinye ego na-agba mbọ na-adọta itinye ego n’ime obodo, kama ka ndị ụlọ ọrụ anyị dị elu na ụlọ ọrụ ndị nnọchianya leba anya nke ọma ka anyị ga-esi kwenye ndị na-etinye ego na mba ndị ahụ itinye ego na Naijiria.
“Otu n’ime ihe anyị chọrọ ka ụlọ ọrụ ndị nnọchianya mee bụ inye anyị ohere iji soro ndị na-etinye ego na-eme atụmatụ na-akpakọrịta. Obodo ọ bụla nwere ohere ha mara mma na ya, ha nwere akụkụ nke uru asọmpi. “
O kwuru na NIPC mere nyocha iji mata ụfọdụ mba na uru ha na-asọmpi, na-agbakwụnye na ọ dị mkpa ịdọta ndị na-etinye ego na mba anyi.
Prime Minista Israel Bennett gara Abu Dhabi.
Moderna na-ekwupụta nsonaazụ dị mma maka ọgwụ mgbochi Omicron.